ASA UPVC မြှောင်းပုံခေါင်မိုးစာရွက် W1025 - တရုတ်ဟူဘေး Shengyu အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ
Shengyu UPVC မြှောင်းပုံခေါင်မိုးစာရွက်, uPVC, ASA ဗဓေလသစ်နှင့်အတူရတဲ့အရာတွေ finish ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာ Ultra-ခရမ်းရောင်ဓါတ်ရောင်ခြည်, damp, အပူ, Chilling နှင့်သက်ရောက်မှုအောက်မှာအရောင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အလုပ်ရုံ, ဂိုဒေါင်, အိုးအိမ်များနှင့်အများအပြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၌နှစ်ပေါင်းများစွာလျှောက်လွှာသမိုင်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအမြဲတမ်းခေါင်မိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။ Shengyu UPVC ခေါင်မိုးစာရွက်အမိုးမိုးနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သစ်တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ Tha, ခက်ခဲတဲ့အရောင်အတွက်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ် ...
Shengyu UPVC မြှောင်းပုံခေါင်မိုးစာရွက်, uPVC, ASA ဗဓေလသစ်နှင့်အတူရတဲ့အရာတွေ finish ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာ Ultra-ခရမ်းရောင်ဓါတ်ရောင်ခြည်, damp, အပူ, Chilling နှင့်သက်ရောက်မှုအောက်မှာအရောင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အလုပ်ရုံ, ဂိုဒေါင်, အိုးအိမ်များနှင့်အများအပြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၌နှစ်ပေါင်းများစွာလျှောက်လွှာသမိုင်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအမြဲတမ်းခေါင်မိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။
Shengyu UPVC ခေါင်မိုးစာရွက်အမိုးမိုးနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သစ်တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသတ္တုနှင့်သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်ထက် သာ. ကောင်း၏, ခက်ခဲတဲ့အရောင်အတွက်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ပို. အရေးကြီးသည်ကအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပန်းခြံအတွင်းရှိသံချေးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm လိုအပ်သလို 3.0-6.0KG / ㎡ ခြောမှတျတောကျပသော အဖြူ, အပြာ, Gray, ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု, နီ
ယခင်: ASA ဗဓေလသစ် UPVC မြှောင်းပုံခေါင်မိုးစာရွက် T980
နောက်တစ်ခု: Glass ကိုဖိုင်ဘာဗဓေလသစ်ခေါင်မိုးစာရွက် RY720-B ကိုအားဖြည့်